Yakavanzika Policy & Makuki - Ndiri kubika
Ruzivo rwakadzama nezve Kugadziriswa kweYako Dhata Dhata
Yakapedzisira kugadziridzwa: Kukadzi 21, 2020
Isu tinoshandisa Yako Yemunhu data kupa uye nekuvandudza Sevhisi. Nekushandisa iyo Sevhisi, Unobvuma kuunganidzwa uye kushandiswa kweruzivo zvinoenderana nePamutemo Policy.
Mashoko ekuti iyo yekutanga tsamba yakapihwa mari ane zvirevo zvinotsanangurwa pasi pemamiriro anotevera.
Dudziro dzinotevera dzinozova nerevo imwechete zvisinei nekuti dzinoratidzika mune imwe kana mune yakawanda.
kambani (inonzi "Kambani", "Isu", "Isu" kana "Yedu" muchibvumirano ichi) zvinoreva solefoodkitchen.com.
Website inoreva solefoodkitchen.com, inowanikwa kubva https://solefoodkitchen.com
nyika zvinoreva: Pakistan
Cookies anogona kuva "Anoramba" kana "Session" Cookies. Persistent Cookies zvinoramba zviripo pakombuta yako kana nharembozha paunoenda kunze kwenyika, nepo Session Cookies ichibviswa nekukurumidza paunovhara web browser yako.
Kuchengeta uye Performance CookiesType: Persistent CookiesInotungamirwa ne: Chechitatu-Mapato Chinangwa: Aya maKuki anoshandiswa kuteedzera ruzivo nezve traffic kuWebhu uye mashandisiro evashandisi Webhusaiti. Ruzivo rwunounganidzwa kuburikidza neaya maKuki anogona kunanga kana zvisina kunangana iwe semumwe mushanyi. Izvi zvinodaro nekuti ruzivo rwunounganidzwa runowanzo sunganidzwa nechiratidzo chekunyepedzera chakabatana nechishandiso chaunoshandisa kuwana iyo Webhusaiti. Tinogona zvakare kushandisa aya maKuki kuyedza kushambadza kutsva, mapeji, maficha kana mashandiro matsva eWebhusaiti kuti tione maitiro evashandisi vedu kwavari.
Targeting uye Kushambadzira CookiesType: Persistent CookiesInotungamirwa ne: Vatatu-Mapato Chinangwa: Aya maKuki anoteedzera maitiro ako ekubhurawuza kutigonesa kuratidza kushambadza uko kungangove kwekufarira Iwe. Aya maKuki anoshandisa ruzivo nezve yako yekutsvagisa nhoroondo kuti ubatanidze Iwe nevamwe vashandisi vane zvakafanana zvido. Zvichienderana neruzivo irworwo, uye nemvumo Yedu, vechitatu vashambadzi vanogona kuisa maKuki kuti vakwanise kuratidza kushambadza izvo zvatinofunga kuti zvichaenderana nezvako zvaunofarira iwe uri pane wechitatu webhusaiti.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve ma cookie atinoshandisa uye zvaunosarudza zvine chekuita nemakuki, ndapota shanyira yedu Cookies Policy.
Nevashandisi Vebasa: Tinogona kugovera Rwako ruzivo neVanopa Sevhisi kuongorora uye kuongorora mashandiro eSevhisi yedu, kuratidza kushambadza kwauri kuti ubatsire kutsigira uye kuchengetedza Sevhisi Yedu, kuti tibate Iwe, kushambadza kune echitatu bato mawebhusaiti Kwauri mushure mekunge Washanyira Sevhisi yedu kana yekubhadhara kubhadhara.
Uine vamwe vashandisi: paunogovana ruzivo rwevanhu kana neimwe nzira kudyidzana munzvimbo dzeruzhinji nevamwe vashandisi, ruzivo rwakadai runogona kutariswa nevose vashandisi uye runogona kugoverwa pachena kunze. Kana Iwe ukafambidzana nevamwe vashandisi kana kunyoresa kuburikidza neTatu-Bato reSocial Media Service, Vako vanofambidzana neTatu-Boka Social Media Service vanogona kukuona Iwe zita, chimiro, mifananidzo uye tsananguro yezviitiko zvako. Saizvozvowo, vamwe vashandisi vanozogona kuona rondedzero yeYako chiitiko, kutaurirana newe uye kuona yako Mbiri.
Vanopa Service vanokwanisa kuwana yako Yega Data chete kungoita basa ravo panzvimbo Yedu uye vanosungirwa kuti varege kuzivisa kana kuishandisa kune chero chinangwa.
Tinogona kushandisa vechitatu-bato Vapi veVanopa kuti vaone uye kuongorora mashandisiro eSevhisi yedu.
StatcounterStatcounter ndeye webhu yekuongorora traffic chishandiso. Unogona kuverenga Yakavanzika Policy ye Statcounter pano: https://statcounter.com/about/legal/
Tinogona kushandisa vanopa sevhisi kuratidza kushambadza kwauri kuti tibatsire kutsigira uye kuchengetedza Basa Redu.
Bing AdsBing Ads ibasa rekushambadzira rinopihwa neMicrosoft Inc. Unogona kusarudza kubva paBing Ads nekutevera rairo papeji reBing Ads Sarudza peji: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-adsKuti uwane rumwe ruzivo nezve Bing Ads, ndapota shanya yavo Yakavanzika Policy: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement
Kubatana AdsUnity Ads inopihwa neUniity Technologies Unogona kusarudza kubva Kubasa Ads sevhisi nekutevera rairo sekutsanangurwa neUniity Technologies pane yavo Yakavanzika peji peji. https://unity3d.com/legal/privacy-policyKuti uwane rumwe ruzivo nezve Unity Technologies, ndapota shanyira Unity Technologies Yakavanzika Policy: https://unity3d.com/legal/privacy-policy
Iyo Kambani inoshandisa ekumisikidza masevhisi kushambadza kune wechitatu bato mawebhusaiti Iwe Iwe mushure mekunge Washanyira Sevhisi yedu. Isu nevatengesi vedu vechitatu-bato tinoshandisa makuki kuzivisa, kukwidziridza uye kushambadzira kushambadza kunoenderana neYako yapfuura kushanya kuSevhisi kwedu.
Bing Ads KudzokororaBing Ads yekumisikidza sevhisi inopihwa neMicrosoft Inc. Unogona kusarudza kubva muBing Ads inofarira-based ads nekutevera mirairo yavo: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-adsUnogona kudzidza zvakawanda nezve zvakavanzika maitiro uye marongero eMicrosoft nekushanyira yavo Chakavanzika Policy peji: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement
AdRollAdRoll yekumisikidza sevhisi inopihwa neSemantic Sugar, Inc. Iwe unogona kusarudza kubuda muAdRoll kushambadzira nekushanyira iyi AdRoll Kushambadzira Inofarira peji rewebhu: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=falseKuti uwane rumwe ruzivo nezve zvakavanzika maitiro eAdRoll, ndapota shanyira iyo AdRoll Chakavanzika Policy peji rewebhu: http://www.adroll.com/about/privacy
Basa redu haritauri kune chero munhu ari pasi pegumi nematatu. Isu hatizive isu toziva ruzivo kubva kune chero munhu ari pasi pemakore 13. Kana iwe uri mubereki kana muchengeti uye Iwe uchiziva kuti Mwana wako akatipa isu neData Yega, ndapota Taura nesu. Kana tikazoziva kuti Takatora Yemunhu data kubva kunaani ari pasi pemakore gumi nematanhatu pasina kuongororwa kwekubvumirwa nevabereki, Isu tinotora matanho ekubvisa iwo ruzivo kubva kumaseva edu.
Isu zvakare tinogona kudzikisira maunganidze, mashandisiro, uye chengetedzo tumwe ruzivo rweVashandisi vari pakati pemakore gumi nematatu kusvika gumi nemasere ekuberekwa. Mune zvimwe zviitiko, izvi zvinoreva kuti Hatizokwanise kupa kumwe kushanda kweSevhisi kune vashandisi.
Kana Tichifanira kuvimba nemvumo sechikonzero chepamutemo chekugadzirisa Ruzivo rwako uye Nyika Yako inoda mvumo kubva kumubereki, Tinogona kuda mvumo yeMubereki Wako tisati taunganidza nekushandisa iyo ruzivo.
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve iyi Yakavanzika Policy, Unogona taura nesu.
Iwe unogona here kuve nemoto wemoto mune grill?
Nguva dzose chengetedza grate yemarasha mukati megrill paunenge uchiishandisa semoto
Ndeipi Camembert yakanakira kubheka?
Camembert inotengeswawo muvhiri rose, zvichiita kuti zvive nyore kubheka. Kana
Unogona here kudziisa zvekare mbishi dzakaomeswa nechando kaviri?
Zvasara zvinofanira kudyiwa mumazuva matatu kana mufiriji kana kuti mwedzi mitatu kana chando
Zvinotora nguva yakareba sei kubika Nyika Yakaomeswa Ribs?
Nechando, bika kwemaminetsi makumi mana nemaminetsi gumi nemashanu ekumanikidza kusunungurwa. Inogona
Mhinduro Inokurumidza: Ndeupi urongwa hwaunofanira kubika kudya kweKutenda?
Ndeipi kurongeka kwandinofanira kutanga kubika Dinner yekutenda? Kunyange zvazvo zvakanakisisa kubika
Mubvunzo wako: Paunobika sipinachi inorasikirwa nekudya here?
Sipinachi inonyanya kudya-dense kana iwe uchiidya iri mbishi, asi inochengeta mamwe mavhitamini
Mubvunzo: Munhu mumwe chete angabika sei?
Unogona here kubika zai nemvura inopisa chete?
Ndeapi temp anofanirwa kubikwa mabhureki?
Bhari yakabikwa inofanirwa kunge inotsenga here?
Unodziyisa sei pie yemichero yakabikwa nechando?
Iwe unofanirwa kushandisa pepa rematehwe paunenge uchibika?
Chii chandingashandise pane kubika spray?